kooxda Horseed gaarcday Heegan kuna guulaystatay Super Cup- Xilli ay 9 cayaaryahan ku cayaaraysay
Friday December 25, 2015 - 08:26:57 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa ku guulaysatay koobka Super ee kubadad cagta 2015 kadib marki ay rigoorayaal 3-1 kaga adkaatay kooxda Heegan .
Labada Koox ayaa garoonka lasoo galay cayaar weerar ku dheehan oo ay la dhaceen dadweynihii usoo daawasho tagay waxaana qaybta hore lagu kala nastay 0-0
Marki laysku soo laabtay Horseed waxaa Roose ka qaatay Xiddiga No.9 Daniel Matento oo todbaadiki hore dhaliyay goolkii ay kooxda Horseed ku qaaday Koobka Jeneraal Daa'uud kadib markii uu qalad ku galay Mahad Maxamed Xaaji oo daafaca uga cayaara Heegan.
Horseed oo 10 cayaaryahan kubadda kula qaybsanaysa Heeganayaa mar kale uu garsoore Maxamed Soomaali kaarka casaanka u taagayMaxamed Cabdi Soomane oo no.2 ee dafaca uga cayaara Horseed.
Horseed oo ku cayaraysan 9 cayaaryahan ayaa heshay laba fursad oo goolal ay ku dhalin kareen waxayna cayaarta kusoo idlaatay 0-0
Rigoorayal loo dhigay waxaa 3-1 guusha ay ku raacday kooxda Horseed,Heegan ayaa qasaarisay 3 kamid ah rigoorayaashi ay tuuratay , halka Horseed 1 rigoore iska qasaariyeen, waxaana rigoorada guusha u dhaliyay Xiddiga No 13 Cali Cadde Axmed.
Laacibka cayaarta waxaa loo aqoonsaday Maxamed Axmed Maxamuud oo No. 11 u qaata kooxda Heegan , waxaana koobka Super Cup 2015 lagu doonsiiyay xiddigaha kooxda Horseed.
Waa koobkii labaad oo xiriir ah oo ay hananayso kooxda Horseed todobaad gudahiis waxayna labada koob gacanta uga dhigtay Kooxda Heegan oo ay si weyn u loolamaan.
Kulankan ayaa waxuu aha akulanki labad oo ay si toos loo tabiyo tariikhda kubada cagta dalka waxaana tabinayay SNTV iyo UNiversal Tv o marki ugu horeysay tabisay cayaaraha kubadda cagta dalka.
Kulankan waxaa garsoore ka ahaa Maxamed Muxudiin Nuur (Maxmed Soomaali) Calanhayaha koowaad Xamze Xaaji Cabdi Calanhayaha labaad Suleymaan Bashiir Shiikh Cabdi Garsooraha Afaad Axmed Xasan Xuseen (Axmed Kaafi)Xeer Ilalaiyaha Saacid Axmed Abuukar.
W/D: Xuseen MaxamedHadaafow